शिक्षा मन्त्रीले पदमा रहने हैसियत गुमाए : शिक्षक संगठन | Janakhabar
शिक्षा मन्त्रीले पदमा रहने हैसियत गुमाए : शिक्षक संगठन
काठमाडौँ , १९ जेठ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाएको बताएको छ । संगठन अध्यक्ष घनश्याम पाठक र महासचिव रमेश रुपाखेतीले आज एक बिज्ञप्ति जारी गदै सो कुरा बताएका हुन् । अध्यक्ष पाठक र महासचिव रुपाखेतीले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “मिति २०७७ जेठ १८ गते शिक्षा मन्त्रीको हवला दिंदै प्रकाशित विज्ञप्तीमा बुँदा नं. १६६ शिक्षा मन्त्रालयको सहमतिमा ल्याइएको होइन । म ECD र कर्मचारीको तलब सुविधाको बारेमा अनुरोध गर्छु भनी पुनः शिक्षा क्षेत्रलाई भ्रमित पार्दै गरिएको प्रचारबाट शिक्षा मन्त्रीको लाचारीपन प्रष्ट हुन्छ । बजेटमा उल्लेखित निति तथा कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रीको सहभागिता बिना बनाईन्छ भने शिक्षा मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बहाल रहने हैसियत गुमाउनु भएको छ भन्ने हाम्रो संगठन अखिल ने पाल शिक्षक संगठनको ठहर रहेका कुरा पनि यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । ”
	बजेटको बुँदा नं. १६६ मा उल्लिखित सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मा नीजि विद्यालयलाई सुम्पिनु, संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नबाट राज्य पछाडि हट्नु हो । यस बुँदालाई खारेज गरियोस् ।
	लामो समयदेखि विद्यालयमा ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक (इसिडी) को पेशागत सुरक्षा र तलवभत्ताको बारेमा बजेट मौन रहनु लज्जाको विषय बनेको छ । यसलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गरियोस् ।
	शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रावधान विपरीत पुन ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति गर्ने भनिएको छ ,यसलाई तुरुन्त सच्याई विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी एकद्वार प्रणालीद्वारा शिक्षकको व्यवस्थापन गरियोस् ।
	शिक्षकको तहगत बढुवा, मास प्रमोशन, शिक्षक अस्पताल, शिक्षक काउन्सिल गठन जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरियोस् ।
	उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नयाँ शिक्षा ऐन तुरुन्त लागू गरियोस् ।
	भर्चुअल तथा अनलाई कक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरियोस् ।
	करिब १३ प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँच भएको वर्तमान दायरालाई विस्तार गरियोस् । प्रत्येक विद्यालयलाई कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नेगरी बजेट बिनीयोजन गरियोस् ।
	एकैपटक सबैलाई सम्भव नभएतापनि प्रथम चरणमा गरिबीको रेखामुनी रहेका करिब १८ प्रतिशत अभिभावकका विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई एकएक वटा ल्यापटप उपलब्ध गराइयोस् ।
	विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र भनी घोषणा गरेको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई क्वारेनटाइन बनाई प्राकृतिक महामारीको युद्धस्थल बनाउने कार्य बन्द गरियोस्, यसबाट बालमनोविज्ञानमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी यसको विकल्पमा बन्द गरिएका सरकारी कार्यालय, ठूला होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुलाई प्रयोग गरियोस् ।